Coldmụ nwanyị na-ahụ maka uwe na-acha oyi n'ahụ China Women oyi na-atụ uwe mkpuchi Manufacturers
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi ọhụrụ ...
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi mkpuchi ...
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi ebughibu ...
Longmụ nwanyị ogologo oge ...
Mgbụsị akwụkwọ / udu mmiri ụzọ nwanyị na-enwu gbaa ihu akwụkwọ mkpirisi mkpuchi jaket, jaket owu
Ihe nlereanya a na-eji akwa luster futuristic futuristic iji kọwaa ụdị avant-garde na akwa. Ndị na-eto eto na-azụ ahịa hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ejiji na nchedo oyi, nwere ụdị dị iche iche.
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke ụmụ nwanyị na-ekpuchi ogologo oge jaket na-agbada, jaket owu 102
Site na mmụba na-aga n'ihu nke ọkaibe nke ọha na eze, ndị mmadụ etinyekwuola uche na nkọwa nke uwe na afọ ndị na-adịbeghị anya, na ịkọwa mma ga-akawanye mma n'ihe gbasara arụmọrụ na arụmọrụ. Mgbe ọtụtụ nyochachara, onye mmebe nke uwe a họọrọ akwa na akwa dị iche iche, wee jikọta njiri eserese na-ewu ewu na ihe dị iche iche na agba.
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke ụmụ nwanyị ọhụrụ etinyere mkpuchi ogologo jaket ala jaket, jaket owu 081
A na-ahụ uwe a site na elu na ala, na-eme ihe ngosi akụkụ anọ, na-ekpuchi eriri nke obi, ukwu, mgbatị na akụkụ ndị ọzọ. Anaghị emechi ndị waistline, nsụgharị dị ọcha, ntụsara ahụ na nkịtị. . Uwe zuru ezu nke uwe ejiji H dị ezigbo mma, yana njirimara ya na ala ya, ọ na-eme ka ndị mmadụ dị gịrịgịrị ma maa mma, ma na-egosipụta ụdị dị iche iche.
Oge mgbụsị akwụkwọ na ụdị ejiji ọhụrụ nke usoro ụmụ nwanyị na-ekpuchi jaketị kwụ ọtọ, jaket owu 076
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ nke àgwà mbụ, a na-atụlekwa nkọwa ọ bụla nke ngwaahịa ọ bụla. Ihe nlere siri ike chọrọ bụ naanị maka ịre ndị ahịa ngwaahịa dị elu. Versiondị kpochapụwo na nke dị mfe abụghị naanị na-egbo mkpa ọ dị igbochi oyi, kamakwa na-ezere bloatedness.
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri ọhụrụ ụmụ nwanyị na-eji udachi ajị anụ ajị anụ, jaket owu 030
Njirimara zuru oke nke uwe ahụ kwụ ọtọ na ala, na-eme ihe ngosi akụkụ anọ, na-ekpuchi akụkụ obi, ukwu, mgbatị na akụkụ ndị ọzọ. Adịghị emechi ndị waistline, mbipute dị ọcha na mma n'anya, na-eweta a nọrọ jụụ ma mara mma ike mara mma, nke ọma na nkịtị. . Uwe ahụ dị ezigbo mma ma na-eme ka ndị mmadụ dị gịrịgịrị ma maa mma.
Uwe mgbụsị akwụkwọ / udu mmiri nke oge mgbụsị akwụkwọ oyi akwa ụmụ nwanyị, jaket owu owu 015
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso nchụso nke àgwà mbụ, ma na-achịkwa ngwaahịa dị mma. Ma ọ bụ imewe, version, mmepụta okokụre ngwaahịa, anyị nditịm ịchịkwa na ugbu na-eri-irè ngwaahịa ahịa.
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi ebughibu drawstring ukwu obere jaket jaket, ala jaket 280
2021 mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri ụmụ nwanyị kpuchiri ekpuchi mkpụmkpụ ala jaket, jaket owu 107
A na-eji akwa polyester akwa akwa ahụ, nke dị mma imetụ aka, wrinkle-resistant, abrasion na-eguzogide, siri ike na windproof. Ihe mkpuchi ahụ dị nro ma ọ bụghị ihe jupụtara.
2021 Mgbụsị akwụkwọ / Uwe ojii kpuchiri uwe oge nile Short Short Jacket, Cotton Jacket-102
Companylọ ọrụ anyị etinyela aka na azụmaahịa azụmaahịa mba ofesi kemgbe ọtụtụ afọ, ọkachasị na nyocha na mmepe, mmepụta na njikwa nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mara mma. Companylọ ọrụ anyị na-agwakọta mkpa nke ndị ahịa na imepụta uwe, ọrụ aka, na akwa, ma na-ewebata azịza ihe eji eme uwe mgbe niile na-ezute njirimara nke onye ahịa, nke enwere ike gbanwee dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
2021 mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri na-egbu maramara nke na-enwu gbaa agba mara mma dị mkpụmkpụ, jaket owu 087
Site n'echiche pụrụ iche, ezigbo echiche nke ejiji na ọmarịcha uto mara mma, onye nrụpụta na-anwa ịdepụta ngwaahịa nke ụdị dị iche iche, anaghị egbochi otu ụdị ejiji. Ka jaket dị ala kpochapụ ọrụ ọkụ dị ọcha. Egwuregwu silhouette, ọrụ aka dị mgbagwoju anya na ịrụ ọrụ nke ọma na nke mbụ abụrụla isi nkọwa dị mkpa nke jaket ala. Jacketdị jaket gbadara nke a mepụtara nwere arụmọrụ ọkụ na echiche nke ejiji. Ngwaahịa ọ bụla bụ nyocha nke ejiji ...
2021 mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri ogologo-abụghị ọkọlọtọ quilted ejiji ala jaket, owu jaket 067
A na-emelite ụdị nke oge ochie, na imepụta olu na-ewusi ọrụ nke nkasi obi na obi ụtọ. N'ime imewe ahụ, ọ kpofuru ntụpọ ahụ na-adịghị ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya, ma na-ewepụ ụdị ejiji oge niile n'oge oyi.
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi siri ike na agba kpuchie mkpuchi dị mfe na ejiji ejiji jaket 053 dị mkpụmkpụ
N'oge oyi, ị nwere ike lee anya na nke a, akwa ịkwa akwa, ikuku dị mma.
Styledị dị mfe, mana ọ mara mma ma enweghị mkpagide ma ọlị. Emere ya nke ọma, nwee nnukwu echiche nke olu, ọ dị ọkụ ma dịkwa mma.